Kunzwisisa Hwakakosha Hwehurema Bhenefiti
Kuremara yave nzvimbo yakajairika pamusoro pemakore gumi apfuura. Kuremara kunogona kuuya nemafomu epfungwa uye epanyama. Vamwe vanozvarwa vaine Kuremara asi vanhu vazhinji vanokudziridza yavo Kuremara panguva yehupenyu hwavo.
Kunyangwe iine hukuru hukuru, remara vanhu vakatarisana nebasa rekukwira kana vachitsvaga basa. Hurumende dzinowanzopa Kuremara zvinobatsira nokuti remara. Izvi zvinobatsira batsira remara vanhu kuti vawane imwe mhando yekugadzikana kwemari uye kudzora zvirinani hupenyu hwavo.
Yakareba uye Pfupi Nguva zvinobatsira
Kuremara zvinobatsira kuwira mumapoka maviri: kwenguva refu-uye pfupi-temu. Zvichienderana nehutano hwako, unogona kukodzera zvese izvi Kuremara zvinobatsira kuburikidza newaunoshandira. Unogona murandu iyo bhenefiti pane wega hwaro kuburikidza neinishuwarenzi kana waunoshandira asingape iyo Kuremara inishuwarenzi.
Mutemo unoda 7-14 mazuva ekumirira kwenguva pfupi Kuremara iyo inoteverwa inosvika kumwedzi mitanhatu ye zvinobatsira. Kazhinji, ipfupi-pfupi Kuremara zvirevo zvinopa mari paunenge wakamirira kubvumidzwa kwenguva refu Kuremara zvinodaro.
Mune mamwe mazwi, pfupi-pfupi Kuremara inishuwarenzi inovhara zvikwereti zvako kwenguva pfupi. Ichakuchengetedza kubva pamubhadharo wekukuvara kudiki kana zvirwere zvisinei nekuti haigone kupa rutsigiro kune tsaona huru kana kukanganisika.
Yakareba Nguva Tsigiro ye hwiricheya Users
Kune rimwe divi kwenguva refu Kuremara zvirevo hazvikombe mukati mushure memazuva makumi mapfumbamwe ekuvapo remara. Iwe unozokwanisa kuwana iyo bhenefiti kwemakore mashanu kana gumi kana kusvika kusvikira warega basa zvichienderana nekuti unozadza sei iyo Kuremara murandu. Muzviitiko zvakawanda, iyo yakareba-nguva Kuremara chirongwa ichi chinotsigira avo vane nguva yakaoma yekugadzirisa mabhiri avo ekurapa pamwe nemari yavo yezuva nezuva nekuda kwavo Kuremara.
Kuzadza a Kuremara fomu rakaringana zvakajairika kumakambani mazhinji einishuwarenzi. Ivo vanoda iyo yakazara yakazara murandu fomu, bvunzo yezvechiremba, kubvunzurudzwa parunhare uye humbowo hwemari kubva kumitero yako. Kubvumidzwa kwenguva refu murandu zvinotora paavhareji kutenderera 3 kusvika kumavhiki masere.
Kuremara Mhosva dze zvinobatsira
Iyo Yemagariro Kuchengetedzwa Kwehutongi ine mamwe marongero akaomarara zvine chekuita nekushandisa, magwaro uye kukodzera etc. Izvi zvinogona kuita kumisikidza iyo Kuremara murandu kuvhiringidza uye kunetsa. Zvingave zvakanaka kuhaya gweta ane ruzivo nazvo Kuremara zvirevo nekuti kune zvakawanda zvinhu zvinogona kukanganisa mhedzisiro yako murandu.
Gweta rinoziva nzira yekukutungamira nenzira uye nekukumiririra kudare kana zvichidikanwa. Ivo vanozokubatsira iwe kuunganidza ese anodikanwa magwaro uye kuchawedzera mikana yako yekuwana yako murandu yakatenderwa.